Malunga - iGeofumadas
Yintoni i Geofumadas
Egeomates indawo elungiselelwe ukukhuthaza amaphulo kummandla ka-Information Technology, kujoliswe kuqala geomatics kunye link yayo kubuchwepheshe esetyenziswa kwi CAD / rahman / ifildi GIS.
Yiyo loo nto isixa esikhulu somxholo sisekwe kwimithambo yokuhlaziya kunye nokusetyenziswa kweenkqubo ezithandwayo zommandla weeNjineli kunye neeNkqubo zoLwazi lweJografi. Isishwankathelo sezihloko eziphambili kunokubonwa kwimixholo yeenkqubo ezinje:
Kuqhelekile kwiiGeofumadas ukuthelekisa kunye nokunxibelelana phakathi kweenkqubo zangaphambili nakwangaphakathi ngaphakathi kweempawu ezifanayo. Uluhlu olubanzi ngakumbi lwesoftware ephononongwe yiGeofumadas inokuba njalo yibona lekhonkco.
Njengesizathu esingenakukuphepha ngenxa yobuchwepheshe obukhankanywe ngasentla, le sayithi igxininisa imiba kwiinkalo ezinxulumene nokulawulwa komhlaba njengoku:
Izixhobo ze-GPS kunye nezikhululo ezipheleleyo
Uqeqesho lweCAD / GIS
Kwakhona ke egeomates kuchuma kwi ekudalweni abantu abaqhelekileyo, ngoko ke ihlala mhlawumbi isiqulatho weendawo zoncwadi, yenkcubeko okanye ngemihla ... isikhumbuze ukuba sisaphila kwaye ngaphaya zokudlala obuchwepheshe akukho ixesha ezihlekisayo format epokothweni.
IGeofumadas ifuna ukuba ligalelo kulawulo lolwazi, ukubheja kulawulo lwentando yesininzi lwezixhobo eziqhelekileyo zokubonisana kwindawo ye-geospatial. Amanyathelo oMthombo ovulekileyo akhuthazwa njengemodeli yoshishino olunqamlezileyo, kunye nokusetyenziswa ngokusemthethweni kweenkqubo kunye nomxholo wepropathi enomsebenzi wokudlala onendima ebalulekileyo kuzinzo kwicandelo.
yindibaniselwano ezi izithuba, ukusetyenziswa simahla kwaye kuphela njengoko ungumongo akunakuphepheka yokuzixhasa kweli shishini imodeli emele amaqonga ikhompyutha, ukunikezelwa kweenkonzo kunye systematization wedemokhrasi olusesikweni okanye self-ngolwazi luyakhuthazwa.
I-Geofumadas yayiyinxalenye yemveliso eyenziwe yiCartesia.org kwinyathelo lokuqala lokudalwa kweeblogi phantsi komxholo we-geospatial. Ngokuhamba kwexesha, igama elithi "geofumed" liye laziwa kwiimeko zokuthetha iSpanishi, nangona imixholo yalo ifikelele kwi. ulwimi lweelwimi ezininzi, kwaye idibene yiGoogle ngeelwimi ezininzi ngesizathu esilula: imibuzo yokwenza izinto iyafana naphi na kwilizwe nakulo naluphi na ulwimi.
Ke ukuba umntu ukhangela "ulungelelwaniso lwe-aUTM kuGoogle Earth" ngesiKorea: I-Google 어스 에서 utm 좌표, ngesiYiddish Iqela le-Google ערד okanye nje ngesiNgesi, akuyikumangaliswa ukufumana iGeofumadas.com kwimiphumo yokuqala.
IGeofumadas isekwe nguGolgi Alvarez kwi2007 njengenyathelo lokudemokhraza ulwazi kwindawo ye-Geo-engineering. IGeofumadas okwangoku ine-editor edibeneyo eIndiya elawula umxholo ngesiNgesi naseSpain kwimeko yokuthetha iSpanish.
Ukuba umxholo weGeofumadas usetyenziswe, unokulandela ngokulandela izihloko ezintsha ngokusebenzisa iindlela ezilandelayo zokubambisana:
Ukuba ufumanisa ukuba nayiphi na into ekule ndawo ihlasela amalungelo e-third party, siyakubulela ngokusenza sazise kwi-imeyile ebonisiwe ngasentla, ingxelo ingxelo.
I-intanethi, i-intanethi okanye ifundiswe?
Andres Benavides uthi:
Ndiyakhathalela kwiklasi ye-microstation v8i, kuquka ulawulo lwe-3d. Unokuqhagamshelana nam kwaye uncome, ikhosi iya kuba yi-8 kunye ne-12 yabantu
UJOSE OCEGUEDA uthi:
Ikhasi eligqwesileyo lixesha lokuqala ndiyibona